Latest News || Radio Dhading
भट्राइद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा !
असोज ९ शनिबार । एकीकृत नेकपा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको छ । आज दिउँसो राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भट्टराईले एमाओवादी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको हो । पार्टी छोडेको बारेमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई
दुवै नाका खोलेर आपूर्ति गर्न चीन तयार
असोज ९ , संविधान जारी भएपछिको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर चासोसाथ हेरिरहेको चीनले तातोपानी र रसुवागढी दुवै नाका खोलेर नेपालमा उपभोग्य सामग्री आपूर्ति सहज बनाउन तयार रहेको जनाएको छ।
सल्यानटारमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज ८ । धादिङ सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेढ धादिङको आयोजना र जिल्ला विकास समिति धादिङको सहयोगमा सल्यानटार गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ५ मा हिजो सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत
दुलही बन्दै रिमा
असोज ५ बुधबार, मोडल तथा अभिनेत्री रिमा विश्वकर्मा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने हुनुभएको छ । रिमाले आउँदो आइतबार लण्डन बस्दै आउनुभएका रोबर्ट विश्वकर्मासँग विवाह गर्न लाग्नुभएको हो । वैवाहिक कार्यक्रम बौद्धको होटल हायातमा सम्पन्न हुनेछ ।
असमझदारीका बारेमा प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय राजदूतबीच छलफल ।
असोज ६ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटि पछिल्लो असमझदारीका बारेमा छलफल गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा राजदूत रायले दिल्लीबाट फर्केपछि त्यहाँ भएको भेटघाट र परामर्शबारे प्रधानमन्त्री
छिमेकी राष्ट्र भारतको असन्तुष्टीप्रतीबारे नेपालभर विरोध !
रेडियो धादिङ धादि☺असोज ६ । छिमेकी देश भारतले नेपालमा संविधान जारी भएपछि उसले गरेको हर्कतले देशभर विरोध भईरहेको छ । नेपाली स्वाधिनता र स्वतन्त्रतालाई खिल्ली उडाउदै भारतले गरेको पछिल्लो हस्तक्षेपले नेपालीको मन माथि ठुलो
रौतहटको रङ्गपुर प्रहरी चौकी तोडफोड !
असोज ५ । प्रर्दशनकारीहरुले रौतहटको रङ्गपुर प्रहरी चौकी तोडफोड तथा आगजनि गरेका छन । सोमबार राति प्रहरी चौकी भित्र रहेको प्रतिक्षालयमा आन्दोलनकारीले आगजनी गरेका छन भने भवनमा समेत तोडफोड गरेका छन । २ सय भन्दा बढिको
विचित्रका मान्छे, जसलाई आलु खाँदा लाग्छ रक्सीको नशा !
असोज ५ ! आलु खाँदा रक्सीको नशा ! सुन्दैमा विचित्र लाग्ने । तर अमेरिकाका एक पुरुषलाई भने यस्तै हुन्छ । उनलाई आलु खाएपछि रक्सीले जस्तै नशा लाग्छ । ओहियोका ३५ वर्षे निक हेसले मलाई आलुको नशा लाग्छ
मुलुकले नयाँ संविधान पाएको खुशीयालीमा धादिङको सदरमुकाम धादिङबेसीमा स्वागत कार्यक्रम ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज ४ । मुलुकले नयाँ संविधान पाएको खुशीयालीमा सोमबार धादिङसदरमुकाम धादिङबेसीमा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मुलुकले नयाँ संविधान जारी गरेको अवसरमा राजनीतिक संयुक्त दल धादिङ र स्थानीय शान्ति
हामी ‘यस मेन’ हुन चाहँदैनौं :प्रचण्ड
४ असोज, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालीहरु भारतको ‘यस मेन’ नहुने बताएका छन् । सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा सरकारले आयोजना गरेको विशेष समारोहमा बोल्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई भारत र चीनले सहयोग
कोसोक नेपालको अधिवेशन र साधारणसभा सम्पन्न ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज २ । परिवर्तनका लागि प्रतिवद्ध समाज कोसोक नेपालको पाँचौ अधिवेशनले रमेश अधिकारकिो अध्यक्षतामा १३ सदसिय नयाँ कार्यसमितिको चार वर्षका लागि आज निर्वाचित गरेको छ । सहयात्री एड्भोकेसी सेन्टरमा आज भएको अधिवेशनले उपाध्यक्षमा
नेपाली जनताले गर्ने फैसलामा भारतको पूर्ण समर्थन रहने ज्ञावलीको भनाई ।
असोज २ । नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञावलीले नेपाली जनताले गर्ने कुनै पनि फैसलामा भारतको पूर्ण समर्थन रहने दावी गरेका छन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा ज्ञवालीले आफ्नो भरखरै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा त्यस्तो प्रतिकृया
डा.गोबिन्द केसी फेरी अनसनमा ।
असोज २ । त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको छ । आफूसँग भएको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै केसीले फेरी ७ औ पटकको अनसन शुरु गर्नुभएको
असन्तुष्ट दलहरुलाई वार्तामा आउन ठुला दलको आग्रह !
असोज २ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले वार्ता र सहमति मार्फत नै समस्याको समाधान गर्ने भन्दै असन्तुष्ट दलहरुलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले भोलि संविधान जारी गर्ने समारोहमा नै सहभागी हुन
राहत स्वरुप गहुँको बीउ र पानीको ट्याङ्की !
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज २ । विनासकारी भुकम्पपछि विपदमा रहेका धादिङको पीडा गाउँ विकास समितिका स्थानीयहरुलाई राहत स्वरुप गहुँको बीउ र पानीको ट्याङ्की पाएका छन् । युनाइटेड मिसन टु नेपाल धादिङको सहयोगमा प्रयास नेपालले प्रतिघर साढे
गलत विज्ञापन प्रकाशन गरि ठगि गर्दै हिड्ने एक यूवक धादिङमा पक्राउ ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज १ , एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विवाह गर्ने विज्ञापन प्रकाशित गरेर ठगी गर्दै हिड्ने एक युवालाई प्रहरीले धादिङबेसीमा नियन्त्रणमा लिएको छ । साउन १३ गते “२५ देखि ३० वर्ष डिभोर्स वा एकल
सुचना अध्यावधिक गर्न जिशिअ ढकालको निर्देशन ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज १ । धादिङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेश ढकालले महाभुकम्पपछि जिल्लाभरका विद्यालय र विद्यार्थीको बारेमा सुचना अध्यावधिक गरी कार्यालयमा उपलब्ध गराउन श्रोतव्यक्तिहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । भुकम्पले भवन भत्काएपछि विकट वस्तीहरुका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक,
संविधान जारी हुने भएपछि यतिबेला सबैतिर खुशीयाली ।
रेडियो धादिङ, धादिङ भाद्र ३१ नेपालका राजनितिक दलहरुले असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने निर्णय पछि अहिले सबैतिर उल्लासमय वातावरण बनिरहेको छ । वैशाख १२ गतेको भुकम्पले विचलित पारेका नेपाली मनहरुलाई हर्षाेउल्लास पार्ने काम नेपाली
एसएलसी पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
भाद्र ३१, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले एसएलसी पूरक (मौका) परीक्षाको परीक्षाफल आज सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षामा कूल ८३ हजार ७८ जना अर्थात ६६.९३ प्रतिशत परीक्षार्थी उतीर्ण भएका छन् । परीक्षामा छात्रतर्फ ५५ हजार ३८२ र छात्रातर्फ
प्रेमकथा लिएर आउँदै रोज
भाद्र ३०, फिल्म ‘म छु नि तिम्रो’को असफलतापछि फिल्म निर्माणबाट पछि हटेका निर्माता रोज राणा ४ बर्ष हराए । रोजले फिल्म निर्माण गर्ने चर्चा चलेपनि आट गर्न सकेनन् । राजनीतिमा पनि सक्रिय भएका रोजले संविधान